ချွန်ဟ ကို အဘယ်ကြောင့် ရွေးသင့်ပါသလဲ။
နိုင်ငံတွင်း နှင့် ပြည်ပမှ ဘာသာပြန်/စကားပြန် ကျွမ်းကျင်သူပေါင်း ၁၀ ၀၀၀ ကျော်ဖြင့် နယ်ပယ်မျိုးစုံအတွက် အလုပ်ပေါင်း ၅၀ ၀၀၀ ကျော်ကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အနှံ နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်မှ ဘာသာစကား ၃၀၀ ကျော်အထိ ဘာသာစကားအများအပြားအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျက်ရှိနေပါသည်။ ကိုရီးယား ချွန်ဟ ဘာသာပြန် ကုမ္ပဏီ (ကေစီတီ) သည် သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါသည်။	..
စမတ်ကျသော ဘာသာစကား ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်ပြီး Chonha.com ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် အဆင့်တိုင်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ	.
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ Chonha.com ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး (ချွန်ဟ)ရှိ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူလိုက်ပါ။	.
ဆွန် ဟွာ၊ လီ။ ကိုရီးယား ချွန်ဟ ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်